SADDEX Dhibaato Oo Uu Neymar Ku Keenay PSG Kadib Markii Uu Ku Fashilmay In Uu Ka Tago Kooxda – Kooxda.com
HomeLigue 1SADDEX Dhibaato Oo Uu Neymar Ku Keenay PSG Kadib Markii Uu Ku Fashilmay In Uu Ka Tago Kooxda
SADDEX Dhibaato Oo Uu Neymar Ku Keenay PSG Kadib Markii Uu Ku Fashilmay In Uu Ka Tago Kooxda
September 7, 2019 Abdiwali Adan Jamac Ligue 1, Wararka Maanta 0
Suuqii xagaaga ee 2019 ayaa ku dhamaaday Musalsal joogto ah oo lagu hadal hayay xiddiga kooxda PSG ee Neymar kaas oo doonayay in uu isaga tago kooxda reer France laba sano kadib markii uu 222 milyan euro ugu soo biiray kooxda kagana biiray kooxda Barcelona.
Kooxda Barcelona ayaa ahayd kooxda sida dhabta ah u doonaysay in ay hesho saxiixa Neymar iyaga oo wadahadalo dhab ah la galay kooxda PSG laakiin dalabkii kooxda reer France ayaa keenay in uu fashilmo saxiixa xiddigu.
Kadib markii uu xidhmay suuqa xagaagu kooxda PSG ayaa sii haysan doonta xiddiga Neymar xilli ciyaareed kale iyo waliba rajo kale oo ay ugu dagaalami karaan ku guulaysiga champions League.
Inkasta oo uu Neymar wax weyn u qaban karo kooxda PSG xilli ciyaareedkan hadana waxa jira dhibaatooyin uu ku keeni doono kooxda kadib markii uu sii joogay kooxda.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 3 dhibaato oo uu ku keeni doono kooxda PSG Xilli ciyaareedkan kadib markii uu ku fashilmay in uu ka tago kooxda.
.Dhibaatada Weerarkii Halista Ahaa Ee Ka Koobnaa Saddexleyda:
Inkasta oo ay ka mid noqon doonto kooxaha ugu weerarka Halisan marka loo eego isla qabsiga cajiibka ah ee xididgaha Saddexley-da ka kooban Neymar, Edison Cavani iyo Kylain Mbappe sidoo kale marka lagu daro saxiixa cusub ee Mauro Icardi hadana waxa jirta dhibaatooyin tan ilaa markii ay samaysmeen saddexleyda weerarka ee Neymar, Cavani iyo Mbappe.
Ayaynan iloobin dhibaatadii weynayd ee ka dhex dhalatay Neymar iyo Cavani kuna saabsnaayd laadista rikoodhada kooxda kadib markii uu Neymar ku soo biiray kooxda iyo waliba Cadhadii uu Mbappe ka muujiyay in aan loo arkin xiddiga ugu muhiimsan ee kooxda marka loo eego in uu yahay xiddiga ugu caawinta badan kooxda labadii sano ee ugu dambaysay.
Mbappe ayaa ku dhawaa in uu isaga tago kooxda PSG suuqii xidhmay markii uu cadho ka muujiyay halka uu ka joogo kooxda marka loo bar-bar dhigo Neymar.
Ilaa haatan ma garan karno dhibaatada ku soo biiri doonta shaxda PSG kadib ku soo biiristii Icardi iyo xaaskiisa ahna wkiilkiisa muranka badan ee Wanda.
Dhibaatada Qolka Labiska:
Inta badan Xiddiga 1-aad ee kooxda ayaa saamayn fiican ku yeesha xiddigaha kooxda sida ay sameeyeen xiddigaha Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar laakiin xiddigaha ayaa dhibaato weyn ku abuura qolka Labiska hadii uu xididgu doorto ama qalbiga ku qabto in uu isaga tago kooxda.
Arintaas ayaa saamayn xun ku yeelanaysa qolka Labiska kooxda iyo waliba maamulka koooxda.
Neymar ayaa muran badan abuuray suuqii xagaaga isaga oo kooxdiisa ku qasbay in ay iibiso waliba qaaday talaaboyin muran badan dhaliyay sida markii uu ka sheekeeyay in guushii weynayd ee ay Barcelona ka gaadhay PSG Tahay midii ugu fiicnayd xirfadiisa ciyaareed.
Riyada kooxda PSG ee ku guulaysiga champions League ayaa labadii sano ee ugu dambaysay dhimatay kadib dhaawacyo soo gaadhay Neymar wakhtigii xasaasiga ahaa ee xilli ciyaareedka isaga oo labada sano dhaawac soo gaadhay Neymar wareega 16-ka iyada oo PSG Kadib wareegaas kaga hadhay taranka champions League.
Sidaas darteed dhaawacyada xiddiga ayaa laga yaabaa in ay mar kale ka hor istaagto kooxda Ku guulaysiga tartanka marka loo eego in ay si xoogan ugu tiirsan yihiin xiddiga reer Brazil.
SADDEX Sababood Oo Ay Barcelona Ku Doonaysay Saxiixa Marcus Rashford & Kulan Qarsoodi Ah Oo Ay La Qaateen Oo La Ogaaday
Sababtii Ayna Real Madrid Ula Soo Saxiixan Paul Pogba & Neymar Oo La Kashifay